हस्तमैथुन गर्नेहरुले यो कुरा जान्न जरुरी छ – Bannigadhi Today
हस्तमैथुन गर्नेहरुले यो कुरा जान्न जरुरी छ
धनराज साउँद २०७६ भदौ २६, बिहीबार २२:००
हस्तमैथुनका सम्बन्धमा समाजमा अनेक धारणा व्याप्त छ । कतिले यसलाई समस्या मानेका छन्, कतिले समधान ।
एकथरीको तर्क छ, हस्तमैथुनको स्वास्थ्यमा कुनै हानी छैन । बरु, यसले यौन आवेग शान्त गर्छ । यौन कुण्ठा हटाउँछ । मनोविकार हटाउँछ । अर्को फाइदा त के भने, हस्तमैथुनले बलात्कार जस्ता आपराधिक कृत्य कम गर्न सघाउ पुर्‍याउँछ । किनभने यसले क्षणिक रुपमा यौन उत्तेजना शान्त गर्छ ।
तर, किशोरवयमा पुगेपछि बढ्दो यौन चाहाना शान्त गर्न किशोर/किशोरीले यौनाङ्गमा स्पर्श गर्छन् । उनीहरुले यो कुरा खुलेर बाहिर भन्दैनन् । र, उनीहरुलाई लाग्छ, ‘कतै मैलें नराम्रो काम त गरिरहेका छैन ?’ यस्तै भावनाले उनीहरुमा हिनताबोध पैदा हुनसक्छ ।
विज्ञानले यसलाई गलत भन्दैन । हस्तमैथुनलाई स्वास्थ्यका लागि राम्रो र सामान्य मानिन्छ ।
के हो हस्तमैथुन ?
के हस्तमैथुन गल्ती हो ?
हस्तमैथुन गल्ती होइन । यो आनन्द अनुभूत गर्ने प्राकृतिक तरिका हो । यसले स्वंमलाई आनन्द दिलाउँछ । यो नितान्त व्यक्तिगत कुरा पनि हो । सार्वजनिक स्थानमा यस्तो काम गर्नु गैर कानुनी मानिन्छ ।
हस्तमैथुन युवा-युवती दुबैले गर्छन् । युवाहरुमा १७ बर्षको उमेरपछि हस्तमैथुनको इच्छा तिब्र हुन्छ ।
हस्तमैथुनले स्वास्थ्यमा कुनै हानी गर्दैन । हस्तमैथुनले पागल वा अन्धा बनाउँदैन । हस्तमैथुन गर्दा आँखको तल कालो हुने वा शारीरिक विकास रोक्ने पनि गलत कुरा हुन् ।
सत्य त के भने, यसले हाम्रो तनाव कम गर्छ । शरीरमा खुसी संचार गराउँछ । खुसी ल्याउने हर्मोन इन्डारफिन्स श्राव गराउँछ । यसले रिल्याक्स महसुष हुन्छ ।
साथै हस्तमैथुनले सुत्नका लागि सहयोग गर्छ, निजी अंगलाई सक्रिय राख्छ ।
हस्तमैथुनले स्वास्थ्यमा हानी नपुर्‍याउने मात्र होइन, बरु यौन सम्पर्कभन्दा यो सुरक्षित र गोप्य पनि हुन्छ । यौन सम्पर्कमा कतिपय खतरा वा समस्या हुन्छ, जो हस्तमैथुनमा हुँदैन । यसले यौनजन्य रोगहरु सर्ने भय पनि हुँदैन ।
क्याटेगोरी : जीवन शैली, मनाेरञ्जन, रोचक, शिक्षा
रामारोशन गाउँपालिकामा ६ दिनदेखि तालाबन्दी : गाउँपालिका मूकदर्शक
बान्नीगढीमा आन्दोलन : नेकपा समाजवादीको ऐक्यबद्धता सहित विज्ञप्ति
बान्नीगढी गाउँपालिकामा गरिएको तालाबन्दी कायमै : गाउँपालिका मुकदर्शक…
बान्नीगढी गाउँपालिकामा विद्यार्थी तथा अभिभावकद्वारा तालाबन्दी (भिडिओ सहित)
शिक्षक अनुदान कोटा काट्ने बान्नीगढीको निर्णयप्रति कालिकाका सरोकारवाला…